अनिश्चित पाकिस्तान, बलियो अष्ट्रेलिया ! | Hamro Khelkud
अनिश्चित पाकिस्तान, बलियो अष्ट्रेलिया !
एजेन्सी – एकदिवसिय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधवार साविक विजेता अष्ट्रेलिया र पाकिस्तानबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो ३:१५ देखि सुरु हुनेछ ।
प्रतियोगितामा अष्ट्रेलिया तेस्रो र पाकिस्तान दोस्रो जितको खोजिमा छन् । पहिलो खेलमा अफगानिस्तानलाई ७ विकेट र दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजलाई १५ रनले हराएको अष्ट्रेलिया तेस्रो खेलमा भारतसँग ३६ रनले स्तब्ध भएको थियो ।
यता पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजसँग ७ विकेटले स्तब्ध भएको पाकिस्तानले दोस्रो खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै घरेलु तथा उपाधिको प्रमुख दाबेदार टोली इंग्ल्यान्डलाई १४ रनले पराजित गर्दै सबैलाई आश्चर्य पारेको थियो । श्रीलंकासँगको खेल भने वर्षाको कारण अंक बाड्न बाध्य भएको थियो ।
इंग्ल्यान्डलाई पराजित गरेको पाकिस्तानको मनोबल पनि उच्च छ । यता दुई महिना अघि पाकिस्तानको घरेलु मैदानमा अष्ट्रेलियाले पाँच ओडीआई सिरिज क्लिन स्विप गरेको थियो । अष्ट्रेलिया त्यहि नतिजा दोहोर्याउन चाहन्छ । हेड टु हेडमा अष्ट्रेलिया धेरै बलियो देखिन्छ । हालसम्म यी दुई देशबीच कुल १ सय ३ वान डे खेल भएको छ । जसमा अष्ट्रेलिया ६७ खेलमा विजयी हुँदा ३२ खेलमा पराजित भएको छ । एक खेल बराबरीमा रोकिदा ३ खेलको नतिजा विहीन छ ।
अलराउण्डर मार्कस स्टोइनिस चोटका कारण आजको खेलमा टिम बाहिर रहेको अष्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्डले मंगलबार नै सार्वजनिक गरेको छ । उनको स्थान मिचेल मार्शले लिनेछन् । पाकिस्तानले आज सुरुवाती दुई खेलमा खराब प्रर्दशन गरेका हसन अलीको स्थानमा युवा खेलाडी शाहिन शाह अफ्रिदीलाई मौका दिन सक्ने उच्च संभावना देखिन्छ ।
डेविड वार्नर, स्टिभ स्मिथ, ग्लेन म्याक्सवेल, मिचेल स्टार्क, नाथन कुल्टर नाइल, प्याट कमिन्स अष्ट्रेलियाका प्रमुख खेलाडी हुन् । पाकिस्तानका फखार जमान, बाबर आजम, मोहम्मद हफिज, सादव खान, मोहम्मद आमिर प्रमुख हतियार हुन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पाकिस्तान विरुद्ध अष्ट्रेलिया : प्लेयर्स टु वाच